DAAWO VIDEO:Boqor Burhan Oo Go’aan Culus Ka Soo saaray Buranka Dekada Boosaso.. | Marqaan News Agency
DAAWO VIDEO:Boqor Burhan Oo Go’aan Culus Ka Soo saaray Buranka Dekada Boosaso..
Published on December 6, 2017 by mar · 5 Comments
Qowmiyad dhan ee qabiil ka sarreysa ayuu Eebbe hoggaaminteeda taajkaa ku saaray oo uu mansabkeeda kugu fadilay. Waa qowmiyadda Soomaalida ugu weyn ee ugu na taariikh dheer. Waa qowmiyadda oogu dhul ballaadhan ee ugu maalqabeensan. Waa qowmiyadda oogu aqoon sarreysa.
Maalinkan maanta ah waxaa uu waajibkaagu ahaa in aad maqaamkeeda garawsato oo aad martabaddeeda ay hoos uga dhacay dib ugu soo sare qaaddo. Waxaa faral kugu ahaa in aad boqortooyinkeedii iyo saldanadaheedii ay Soomaaliya ka lumisay dib ugu soo nooleyso. Waxaa ay maalinka maanta ahayd in aad heerkaa sare caalamka ugu xidho oo ay haddeer ganacsiyo waaweyn iyo aqoon isweydaarsi baahsani ka dhexeeyaan. Waxaa xaq ahaa in ay dunidu maanta Soomaaliya oo dhan Boosaaso kaga soo hiranayso. Laakiin macal asaf waajibaadkii laguu igmaday iyo mansabkaa laguu gartay si xun baad u gabtay.
Qowmiyadda laguugu caleemo saaray faro kuma haysid oo iyana falqalalaadday kol haddii sidan ba’an loo kala qoqobay.
WE WISH YOU WERE A VISIONARY AND PRAGMATIC KING. SADLY NOT. WHAT A LOST GOLDEN OPPORTUNITY.
maad ilaahay sidaa u amaantid cismaanay qabiil iyo somali maxaa kala haysta
Salaan qaali ah ina-abti. Armaa ayaan isleeyahay Ilaahay amaantiisu aad ayay uga sarreysaa oo ugana nasahantahay intaas yar ee aan Daaroodka ka sheegay?
Is ka dhuumo sidaadii saaxiib oo hadhaw mashquul baan ahaa iyo riwaayado rakhiis ah qiil iyo maraanmarsiinyo ka yeelo.
Runta iyo xaqu aad ayay u qadhaan yihiin oo keligaa na ma aha inta aan oggolayn. Qaar badan oo Puntland magaceeda ku hadla ayaan runta iyo xaqa oggolayn. Hase ahaato ee anigu cid aan runta iyo xaqa ooga baydhayaa ma ay jirto habaar na la igu kari waa.
Aynu ilbaxda sidooda xaqiiqooyinka kaga doodno, kii doodda looga adkaado na nin rag ah sidiisa dakharka soo gaaray ha ugu adkeysto.
Maamuladaan , la iskuma haleyn karo. waxa aynu ku soo Caana maaley, waa Boqortooyadeenii, Boqor burhanwaa in awwod dhaqaale iyo Ciidan la siiyaa.